လာပါပြီ သောမတ်ရှယ်ဘီ နောက်တစ်ကား…… ပြီးတော့ သောမက်ရှယ်ဘီ ရဲ့ ညီအငယ်ဆုံးလေးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့မင်းသား Joe Cole မင်းသားဟာ ဒီအထဲမှာ ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်မင်းသားကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ယှဉ်တွဲသရုပ်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ… ပြီးတော့ ဒီထဲက ဖိုက်တင်ခန်းတွေကလည်း ဂျွန်ဝစ်နဲ့ Peaky Blinder ပေါင်းထားသလိုမျိုး နည်းနည်းကြမ်းကြမ်းတွေပါပြီးတော့ ဂိုဏ်းကြားကပြဿနာတွေလည်းပါသလို ရက်စက်တဲ့အပြုအမူတွေလည်း ပါနေမှာပါ…
ဇာတ်ကားလေးကတော့…… ယဉ်ကျေးမှုအစုံ လှုပ်ရှားမှုအစုံရှိတဲ့ လန်ဒန်မြိုကြီးနောက်ကွယ်မှာရှိနေတဲ့ လူမျိုးပေါင်းဆုံပါဝင်တဲ့ ဂိုဏ်းကြီးတစ်ဂိုဏ်း……. အဲဒီဂိုဏ်းကြီးဟာ မကောင်းမှုများစွာကို လုပ်ဆောင်နေလျက်ရှိပါတယ်.. တစ်နေ့မှာ အဲဒီဂိုဏ်းကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ ဖြစ်တဲ့ မိသားစုကြီးက ဖင်န်ဝေါလစ် ဆိုတဲ့ ဖခင်ကြီးတစ်ယောက် လုပ်ကြံခံလိုက်ရပါတယ်…. လန်ဒန် ဂိုဏ်းဆိုတော့ မိသားစု FAMILY လို့ပဲသုံးတာပေါ့…… အဲဒီမိသားစုရဲ့ဆက်ခံသူဖြစ်တဲ့ ရှန် ဝေါလစ် ဟာ သူ့အဖေကိုသတ်သွားတဲ့သူအား အလောတကြီးလိုက်ရှာမယ်………
အဲဒီနောက်ကွယ်ဂိုဏ်းတွေကို သရုပ်ဖျက်ပြီးစုံစမ်းနေတဲ့ အဲလိရော့ ဘင့် ဟာ ရှန်ဝေါလစ်နဲ့ တွေ့သွားပြီးတဲ့နောက်….. မိသားစုကြီးမှာ အလေးစားရဆုံးဖြစ်တဲ့အက်ဒ် ဒူမာနီ ကလည်း ရှန်ဝေါလစ်ကို တူလိုသားလိုထိန်းသိမ်းရင်း……. လန်ဒန်မြိုကြီးက ဂိုဏ်းများအကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ပါဦး…